Hitachi Fekitori | China Hitachi Vagadziri, Vatengesi
Yekutanga Hitachi APMT1135PDER-HT JP4020 cnc chishandiso chekugaya cutter
Chaiyo Hitachi APMT1135PDER-HT JP4020 cnc chishandiso chekugaya cutter 1.Supply ISO standard cnc chishandiso. 2.Material: yakagadzirwa kubva ku100% mhandara mbishi zvinhu. 3.Delivery: mukati memazuva gumi pamusoro pekusimbisa prepaid. 4.Zvimwe: Tinogona maererano nemutengi kupa dhizaini pepa kana saizi kuburitsa, uye gamuchira diki odha. Inoshanda Mashini cnc chishandiso Stock 1.Zveyakajairwa, uve nezvakakwana muchitoro. 2 Kune zvisina-mwero, zvinoda kuve zvakagadziriswa. Nonstandard odha Gadzirisa sezvaunokumbira. Kurongedza 10 pcs / plastiki bhokisi, t ...
Hitachi cnc lathe yekucheka maturusi CPMT080204 CY250
Zvimiro zve hitachi carbide inoisa 1.Original Japanese brand; 2.Suitable simbi & Stainless simbi & kukandira simbi & nonferrous zvigadzirwa; 3.A akasiyana zvigadzirwa zvekucheka, chigayo uye threading; 4.Stability uye chengetedzo inobereka kutendeuka; 5.ISO & ANSI nzvimbo yekushandisa. Rondedzero ye hitachi carbide inoisa Brand Name Hitachi Nzvimbo Yekutanga Japan Model Nhamba CPMT Chinyorwa Tungsten carbide Ruvara Goridhe / Dema / Grey Certification ISO9001: 2008 MOQ 10 ...
Inozivikanwa brand Hitachi carbide inopinza cnc chigayo chishandiso EPNW0603TN-8 JP4120
Hitachi carbide inopinza Maitiro: 1.Original inozivikanwa Japan Hitachi brand; 2.Enables yakakwirira nemazvo yekupedzisa kucheka; 3.New bemhapemha nokuda carbide azvikuya inoisa; Hupenyu hurefu hunopihwa neGX nyowani yekunamatira ine yakanakisa kupfeka kuramba; 5.Application: Yemukati & yekunze kutendeuka kwesimbi, simbi isina simbi, kukanda simbi uye chero imwe hardmetal workpiece; 6.Mamiriro: Asina kushandiswa, Asina kuvhurwa, Asina kukuvara chinhu mune yayo yepakutanga kurongedza. Hitachi carbide inoisa Magadzirirwo: Brand Zita Hitachi Nzvimbo yeO ...
HITACHI indexable carbide yekugaya inoisa EDMT070220R-T JP4020
JDMT070204R Hitachi carbide inopinza yekugaya chishandiso